अर्किकी श्रीमती लिएर भारत पुगेका कुमारलाइ जव आफ्नै श्रीमतीले भेटेर मुखभरी थुकिन (भिडियो)
केही दिन देखि सामाजिक सञ्जालमा निकै चर्चा पाएको नकुल अधिकारी र अनुपाको घटनामा नयाँ ट्वीष्ट आएको छ । अनुपा भारतको केरलामा फेला परेपछि घटनाले अर्को रुप लिएको हो ।
झण्डै ५० लाख बढीको सम्पत्ती लिएर दुई बच्चा सहित श्रीमती सम्पर्क विहिन भएपछि तनहुँका नकुल अधिकारी दुई महिना यता खोजीमा थिए । श्रीमती अनुपा अधिकारी सम्पर्क विहिन भएकी हुन् । नकुल दुवईमा रहेर वैदेशिक रोजगारीमा थिए । दुई महिना भन्दा लामो समय देखि उनको श्रीमती छोराछोरी सहित सम्पर्क विहिन भएपछि उनी पनि रुँदै मिडियामा आएका छन् । हराएकी श्रीमती खोज्न नकुल तीन दिन तिन रातको रेल र बसको यात्रा गरेर भारतको केरला पुगेका थिए । केरलाको पानामार भन्ने स्थानमा रहेकी अनुपालाई लिन नकुल अधिकारी भारतीय प्रहरीको सहयोगमा पुगेका थिए ।
दुवईमा दुख गरेर कमाएर बैंकमा राखेको पैसा श्रीमानलाई थाहा नदिएर निकालेको, छिमेकीमा पनि ऋण नै ऋण बनाएर श्रीमती सम्पर्क विहिन भएकी थिइन् । कक्षा ७ मा पढ्दा देखि प्रेम गरेर विवाह गरेकी श्रीमतीले यस्तो गर्छिन होला भनेर नकुलले सोचेका पनि थिएनन् । १३ वर्ष सम्म दुवईमा बसेर कमाएका नकुल अहिले घर आउँदा घरमा न श्रीमती छन् न त छोराछोरी ।
केरालामा श्रीमती फेला परेपछि भने नकुल आफ्ना छोराछोरीलाई भेट्न पाउने भएँ भन्दै खुसी भएका थिए । यता अनुपालाई लिएर गएका कुमार कार्कीको श्रीमती पनि प्रहरी कार्यालयमा श्रीमानलाई कुरेर बसेकी थिइन् ।
विवाह भएको १५ वर्ष पछि कुमार कार्की भन्ने ब्यक्तिसंग आफ्नो श्रीमती गएको नकुलको भनाई छ । कार्कीले आफ्नो श्रीमतीसंग म्यासेन्जरमा कुरा गरिरहेको आफुले थाहा पाएको उनले बताए । नकुलको श्रीमती लिएर जाने कुमार पनि दुवईमा बस्दै आएका थिए ।
तृष्णा जन्मिदा उनी नेपालमा थिए तर कान्छी छोरी तृप्तीलाई प्रत्यक्ष अनुहार पनि हेर्न पाएका छैनन् । कान्छी छोरीलाई राम्रोसंग चिन्न पनि पाइन् । विदेशी भूमीमा आफुले दुख गरेर भएपनि छोरीलाई डाक्टर बनाउने उनको चाहना थियो । उनी भन्छन् छोरीलाई डक्टर बनाउन चाहन्थे तर अहिले मलाई अहिले दौडने बनाएकी छ ।
विदेशमा श्रीमानले कमाएको पैसा समेत लिएर भागेको भनिएकी अनुपा अधिकारी अहिले भारतको केरलामा फेला परेकी छन् । तनहुँको नकुल अधिकारीको श्रीमती अर्का पुरुष कुमार कार्कीसंग भागेपछि उनको दुई महिना देखि खोजी भइरहेको थियो ।
नकुलको श्रीमती अनुपा उनका दुई छोराछोरी सहित कुमारसंग भागेकी थिइन् । कुमारको पनि श्रीमती र एक छोरा छन् । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका कुमार नेपाल फर्केपछि घरमा नगएर अनुपालाई लिइर भारतको केरला पुगेका थिए ।
केरालाको एउटा घरको कोठामा अनुपा कुमारका साथ फेला परेकी हुन् । उनहरु बसेको कोठामा अचानक भारतीय प्रहरी सहित नकुल प्रवेश गरेपछि साना दुई छोरी डराएर रोएका थिए । सानो छोरीलाई जन्मेपछि देख्नै नपाएका नकुलले आफ्ना छोरीहरुलाई काखमा लिएर माया गरे । तर विदेशमै रहेका नकुलसंग उनका छोरीहरु नै राम्रोसंग झ्याम्मिएका थिएनन् । सानी छोरीले त बुवालाई चिनेकी पनि थिइनन् ।
भारतको केरालामा पुगेर अनुपाले छोरीलाई विद्यालय भर्ना पनि गराएकी थिइन् । अचानक प्रहरी र मिडिया कोठामा पसेर कुमार र उनका अन्य दुई साथीलाई केरकार गर्न लागेपछि डराएकी अनुपाको छोरीले घटनामा आमाको केही दोश नभएको र संधै बुवाले आमालाई तनाव दिने गरेको भन्दै बिलौना गरेकी थिइन् । अनुपाले प्रहरी सामु कुमारसंग ७ महिना देखि सम्बन्ध रहेको स्वीकार गरेकी छन् ।
अहिले जो संग आफ्नो श्रीमती भागेर गइन् त्यो कुमार कार्कीलाई श्रीमतीले मामाको छोरा भनेर चिनाएको बताइन् । पहिला पनि कुरा गरिरहेको थाहा पाएको थिए तर मामाको छोरा भनेपछि मैले नराम्रो सोच्ने कुरा पनि भएन । दुवईवाट फर्कदा आफुभन्दा दुई साता पहिला कुमार आएको र आफ्नो श्रीमतीलाई लिएर गएको उनले बताए
प्रकाशित मिति February 12, 2020
कब्जियतको समस्या हटाउन अपनाउनुहोस् यी घरेलु उपाय, केही दिनमै मिल्छ राहत
जब विनयको मोबाइलमा सपनाको यस्तो फोटो भेटियो प्रहरी समेत चकित पर्‍यो
सासूलाई नदेखाउन पोस्टर हटाउने अभिनेत्री
पल साहविरुद्ध प्रहरीमा उऽजुरी, कुट,पिट गरेको आरोप
बिहे गर्ने उमेरको मेरो दाइको म’ला’मी म कसरी जाउँ ? महान चेली सदिक्षाको पीडा
राजेश हमाल दम्पत्तिको रोमा’न्स भिडियो बाहिरियो ?(भिडियो)
थाहा छ ? यस्तो ‘नाइटो’ भएका महिला हुन्छन् सुखभोगी र भाग्यमानी
यी ४ कारण महिलाहरुले पटक्कै मन पराउदैनन् क-ण्डम